Beesha caalamka oo ka digtay in uu baaqdo shirkii uu iclaamiyay MD Farmaajo | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Beesha caalamka oo ka digtay in uu baaqdo shirkii uu iclaamiyay MD...
Beesha caalamka oo ka digtay in uu baaqdo shirkii uu iclaamiyay MD Farmaajo
Beesha Caalamka ee saaxiibada taageera dalka Soomaaliya ayaa War kasoo saaray Shirkii uu Madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee Maxamad Cabdullaahi Farmaajo isugu yeeray Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.
War-saxaafadeed kasoo baxay Beesha Caalamka ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay Shirka uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo oo la qorsheeyay in 15-ka bishaan inuu ka dhaco Magaalada Garoowe, Shirkaas oo lagu dhameystirayo hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17kii Sebtembar.
Beesha Caalamka ayaa sheegtay in aysan aaminsaneyn su’aasha ku saabsan goobta shirka lagu qabanyo ay cudurdaar u noqoto dib-u-dhac kasta ee ku yimaada shir-madexeedka, iyagoona Madaxda ku boorriyay inay ku wada-shaqeeyaan niyad wax lagu dhisayo, kana digay dib u dhac ku yimaada Shirka.
Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ku taliyey in Shirka uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo lagu qabto Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka, maadaama uu dhammaaday muddo xileedkii Dowladda Federaalka Soomaaliya, sidoo kalena ku baaqay in la balaariyo Shirkaas.
Previous articleDHAGEYSO:Gorma ayay ahayd wakhtigii kugu horeeyay ee raadiyo dhageysato?
Next articleSaddex qof oo daabacayay shahaadooyin been abuur oo gacanta lagu dhigay